आफूमाथि बन्न लागेको चलचित्रको बारे डा. सिके राउतले यस्तो भने
काठमाडौँ । मधेस आन्दोलनका उक अगुवा डाक्टर सिके राउतको जीवनीमा आधारीत फिल्म बन्ने भएको छ । उनको जीवनीमा आधारीत ‘डाक्टर सिके राउत द प्यासन’ नामक चलचित्र निर्माण गर्न लागिएको ‘मा राधिका इन्टरनेशलन मुभिज प्राइभेट लिमिटेड’ले जनाएको छ ।
उनको भूमिका भोजपुरी फिल्मका परदेशी शाहले निभाउने छन् । फिल्म युनिटले आउँदो छठ पर्वमा रिलिज टार्गेट गरेको छ । फिल्मलाई सन्तोष साहले निर्देशन गर्नेछन् । कलाकारहरु धुव्र कोइराला, पुकार भट्टराई, विशाल पहाडी, किरण थापा लगाएतका कलाकारको मुख्य अभिनय रहनेछ । पवन गौतमले छायांकन गर्ने फिल्ममा रेवन्त विक्रम थापाको द्वन्द निर्देशन रहने छ ।
चलचित्रबारे जानकारी गराउँन आयोजित कार्यक्रममा राउतको पनि उपस्थित थियो । सोही कार्यक्रममा डा. सिके राउतले पनि चलचित्रको बारेमा केही कुरा राखेका छन् । उनले भनेका थिए,‘यो एउटा इतिहास बन्ने छ । यसमा केही विषयमा विवाद पनि हुन सक्ला । तर बुझ्न जरुरी छ, फिल्म भनेको फिल्म नै हो । अहिले सम्म धेरै नेपालीहरुले मेरो जीवनी बुझेका छैनन् ।’
उनले अगाडी भनेका थिए, ‘प्रतिबन्धित भएको कारणले म मिडियामा पनि आउन पाएको हैन, जनसम्पर्क पनि त्यति भएन । जहाँजहाँ राजनीतिक भाषण भयो त्यहाँ हस्तक्षेप भयो । भागदौडकै स्थिति भयो । त्यो अवस्थामा जनताले किन त्यस्तो भयो भनेर बुझ्ने अवसर पाउछन् ।’
किन मानिस यस्तो विद्रोहमा किन उत्रन्छ, कोही मान्छे किन आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्छ । कोही मान्छे किन आफ्नो सुख सुविधा, घर परिवार छोड्न तयार हुन्छ ? त्यो कुरा बुझ्न पनि यो चलचित्रले मद्दत गर्ला । समग्रमा एउटा राजनीतिक जीवन कस्तो हुन्छ, एउटा विद्रोहीको जीवन कस्तो हुन्छ, जतिखेर पनि भागदौडमा बित्छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु, उनले भनेका थिए ।
Tagsडाक्टर सिके राउत